စက်မှုလုပ်ငန်း Chow အဓိကခြောက်သွေ့စက်စက်ထုတ်လုပ်သူ DPPG050s-G Tsix | Twesix
အာလူးဆူဖြိုဖျက်မှုများကိုဆန်ခေါက်ဆွဲနှင့်ဂျုံအမှုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခေါက်ဆွဲနှင့်အတူအာလူးအမှုန့်များကိုပြုလုပ်ထားသည်။ Tsix Theodles Dehydroator မှခြောက်သွေ့ရန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်ခေါက်ဆွဲထိန်သိမ်းများကို Tsix ခြောက်သွေ့ခန်းသို့မတွန်းလှန်ခင်ခေါက်ဆွဲကိုအလွန်အေးခဲစေပြီးခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ခေါက်ဆွဲများကိုပုံသွင်းနိုင်သည်။
Tsix Noodle Dryer ကအာလူးခေါက်ဆွဲကိုဘယ်လိုရေဓာတ်ခန်းခြောက်စေမလဲ
1. အာလူးခေါက်ဆွဲကိုထိန်သိမ်းကွင်းထဲပေါ်သို့ တင်. ခေါက်ဆွဲများကိုအေးခဲစေခြင်းငှါ,
2. တစ်ညနောက်တစ်ညပြီးနောက် Tsix ခေါက်ဆွဲခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းကိရိယာများသို့ရေပေါ်ခေါက်ဆွဲကိုတွန်းတင်ပါ
3. အပူချိန်ကို 50-60 ဒီဂရီဂ, ခြောက်သွေ့သောအချိန် 6-7 နာရီအတွက်ခြောက်သွေ့သောအချိန်၌ထားပါ
input ကိုပါဝါ rated
max input ပါဝါ
v / ph / hz v
1. Datas အထက်တွင်စမ်းသပ်ခြင်းအခြေအနေအောက်တွင်ရှိသည် - လေထုအပူချိန် 20 as, intlet air အခြောက်5℃, အစင်းလေထုခြောက်သွေ့ခြင်း
2. Dehumidity Volume သည်ပုံမှန်စမ်းသပ်ခြင်းအခြေအနေအောက်တွင်စမ်းသပ်ပြီး, ပြင်ပ / မိုးလုံလေလုံအပူချိန်စိုစွတ်သောဘောလုံးနှင့်အညီကွဲပြားနိုင်သည်။
3. ထုတ်ကုန်များ၏နောက်ဆုံးသတင်းများအရမော်ဒယ်များ, parameters များ, စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးအားဤဗားရှင်းကိုအထူးသဖြင့်အကြောင်းကြားမည်မဟုတ်ပါ
Tsix Heat Pump Sprerer ကအဘယ်အရာကိုခြောက်သွေ့စေနိုင်သနည်း။
ပန်းပွင့်& အရွက် အသီး အသား
Roses, Jasmine, Lotus, Lotil, Lilil, နေ့ Lily, Chrysanthemums, ပန်းသီး, သရက်သီး, pitayas, Peach, apricots, Plum, စပျစ်သီး, wolfberry, ဘေကွန်, ဝက်အူချောင်း, spareribs, ဘဲ, အမဲသား, အသားညှပ်, Mutton, ကြက်,
Osmanthus, honeysuckle နှင့်ဒါအပေါ် အနက်ရောင် Wolfberry, Jujube, Litchi နှင့်ဒါအပေါ် ဝှစ်ဘဲဘဲ, အသားထုတ်ကုန်များနှင့်ဒါအပေါ်
စက်မှုလုပ်ငန်း ရေထွက်အစားအစာ အခြားသူများ
ကွိုင်နံ့သာပေါင်း, နံ့သာပေါင်း, ပုစွန်များ, ငါးများ, ပင်လယ်မြင်းများ, ဆေးရွက်ကြီး, ဓာတ်သတ္တုထုတ်ကုန်များ, မျက်မှန်များ, အိုမင်းခြင်းအခန်း
ပုံနှိပ်ခြင်း, ရာဘာ, သားရေ, အထည်, စက္ကူဆလင်ဒါ
အာလူးခေါက်ဆွဲခြောက်စက် ရေခဲပြင်ကိုခေါက်ဆွဲ ခေါက်ဆွဲခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းကိရိယာများ